अवार्ड पाउनुअघि के मनमुटाव क्लियर गर्दै थिइन नम्रता श्रेष्ठ ? (भिडियो वार्ता) « Etajakhabar
अवार्ड पाउनुअघि के मनमुटाव क्लियर गर्दै थिइन नम्रता श्रेष्ठ ? (भिडियो वार्ता)
ताजा खबर काठमाडौँ । हिजो सम्पन्न एलजी फिल्म अवार्डमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले क्लासिक फिल्मबाट यो सालको चौंथो अवार्ड आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भइन् । फिल्ममा गरेको दृष्टिविहिनको अभिनयबाट सबैको मन जित्न सफल भएकी नम्रताले रंगखबरसंगको जम्काभेटमा अवार्ड पाउदाका क्षणहरु सेयर गर्न भ्याइन ।
रंगखबरले सोधेको एक प्रश्नमा नम्रताले अवार्ड पाउनु भन्दा अगाडी आफु र निर्देशकहरु बीच केहि कुरामा भएको मनमुटाव क्लियर हुदै गर्दा नाम आयो त्यसपछि केहि सोच्न नपाएको बताइन ।आखिर के कन्फुजन थियो त त्यहाँ रु जहाँ फिल्मका निर्देशक, नम्रता र पुजा संगै थिए ।